LifeStreet Media Na-eme Ka A Mara Aha
N'ihe banyere nku anya na nlebara anya, ọ dịghị otu ọwa nkesa nwere ike ịsọ mpi egwuregwu egwuregwu. Ndị mmadụ gburugburu ụwa na-etinye ihe dị ka nde 200 nde ụbọchị n’egwu Nnụnnụ ndị iwe na-ewe. Egwuregwu ọhụrụ nke Zynga, Cityville, dọtara Ndị ọrụ 100 nde n'ọnwa mbụ ya naanị. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịnwa ịdọpụ otu mpempe egwuregwu site na ịmịpụ na egwuregwu egwuregwu nkịtị nke na-egosipụta ụdị ha, mana o nwere ike ịbụ na egwuregwu ndị dị otú ahụ ga-abụ nke na-abaghị uru ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndị kacha ere ahịa nke anatala nkwado na ewu ewu zuru ebe niile.
Kedu ụzọ kachasị mma maka ahịa iji nweta uru nke egwuregwu ahụ? Mgbasa ozi dị na ngwa egwu egwu, mana ịchekwa mgbasa ozi dị mkpa na ndị ọrụ na-eme ihe abụwo ihe ịma aka. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ nke Ndụ Lifestreet Revjet mgbasa ozi n'elu ikpo okwu… ha na-enwetakwa nsonaazụ.
LifeStreet na-enye mgbasa ozi ngwà na-elekwasị anya na Facebook, Apple (iOS) na ngwa gam akporo. Ewubere ikpo okwu teknụzụ LifeStreet's RevJet n’elu sava ihe ụwa niile mbụ iji bulie ego ha nwetara. Teknụzụ a na-emetụta ya nnukwu ọsọ ọsọ na mgbasa ozi, peeji nke ọdịda, mkpebi ahịa mgbere, algorithms maximization ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-enweta ego.
A na-ewukwasị ikpo okwu ndụ LifeStreet's RevJet n'elu sava ụwa mbụ nke ụwa yana ọ bụ ngwaahịa $ 25 + ndebanye mmepe mmepe. RevJet na-etinye nnwale nnwale dị elu dị elu maka ọkwọ ụgbọ ala dijitalụ ọ bụla, sitere na ihe ndị a na-ahụ anya dịka mgbasa ozi na ibe ibata na ihe ezi uche dị na ya dị ka mkpebi ịzụ ahịa ahịa na ego na-abawanye algorithms. RevJet na-ewepụta usoro nnweta ego na oke oke nke ndị ahịa ọhụrụ maka ndị na-akpọsa mmekọrịta mmadụ na ekwentị, ndị mbipụta na ndị mmepe ngwa. LifeStreet ruru 350 nde ndị na-elekọta mmadụ na ndị na-eji ngwa mkpanaka kwa ọnwa ma chụpụ ihe karịrị 200 nde ngwa ntinye. A na - akpọ ụlọ ọrụ ahụ otu n'ime ụlọ ọrụ nzuzo 500 kachasị na - eto eto na America site na Inc. Magazine wee hiwe isi na San Carlos, California nwere ọfịs na Moscow, Odessa, na Riga.
Ihe karịrị nde mmadụ 350 na-eji ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya kwa ọnwa, LifeStreet na-ebuputa ndị ahịa ndị mgbasa ozi. Ọnụahịa dị ala nke nwere ọnụego dabere na ọnụahịa ebe onye mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ maka nsonaazụ kama ịpị aka ma nwee nhọrọ ịhọrọ ọnụọgụ kachasị mma site na Cost Per Install (CPI), Cost Per Acquisition (CPA), Cost Per Post Conversion Event (CPX) na na (!), Ndị na-ere ahịa akara agaghị enwe ike ileghara LifeStreet anya .. Ezigbo oge ịkọ akụkọ, ndị njikwa akaụntụ raara onwe ha nye, na ọrụ ndị ọzọ bara uru bụ icing na achicha ahụ.
Ebe ọ bụ na LifeStreet anaghị agba mkpọsa ọ bụla, ị na-enweta naanị ndị ahịa bara uru, nwere ezigbo mmasị na ngwaahịa gị. Budata ngwa mgbasa ozi sitere na Lifestreet Media na saịtị ha.
Tags: androidapụlegwuregwu mgbasa oziipadmobile ad n'elu ikpo okwumgbasa ozi mgbasa ozimobile ngwa mgbasa ozi
Mee 31, 2012 na 2: 54 PM
Onwe m, anaghị m achọ igwu egwuregwu nwere ọtụtụ mgbasa ozi n'ihi na ha na-eji nwayọ nwayọ karịa ngwa ndị ọzọ nwere ike ịnweghị ọtụtụ mgbasa ozi. Ọ bụ ihe ezi uche dị na itinye mgbasa ozi na Angry Birry dịka ọmụmaatụ n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ si n'ọdịdị dị iche iche na afọ ga-ahụ mgbasa ozi maka egwuregwu ọzọ ma ọ bụ ngwa nyocha ọhụụ ọhụrụ; ma o nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka mmadụ niile. Amaara m na m na-akpaghasị ha na mberede wee nwute na ọ na-ebute m gaa na saịtị ọzọ n'èzí egwuregwu ahụ. Obu ihe amalu n’akwukwo m.
Ọ bụ Elyse Bernstein
Jun 1, 2012 na 10:33 AM
Ekwenyere m na Megan, anaghị m amasị egwuregwu na mgbasa ozi ebe ọ bụ na ha na-ebu nwayọ. Enweghị m mmasị na nkwụsị, ọkachasị mgbe ọ dị m ka m na-eme ọfụma yana egwuregwu m. M na-eche otú irè na mgbasa ozi bụ ezie na.
Agbanyeghị, ọ bụ ezigbo ụlọ maka mgbasa ozi. Tinyere egwuregwu ụfọdụ, ị nwere ike iru nnukwu ndị na-ege ntị ma ọ bụ lekwasịrị ndị na-ege ntị anya. Anyị na-ahụ mgbasa ozi ebe niile ugbu a, na egwuregwu, na gas pump, na ATM, wdg.
Lennon Onye Nduzi
Dee 15, 2014 na 8: 27 AM
Ee nke a bụ echiche mgbasa ozi mara mma, mana ndị hụrụ egwuregwu igwu egwu nwere ike ọ gaghị adị ka nke a. Maka na akpọsa ngwa ahịa na-enye ha nsogbu mgbe ha na-egwu egwuregwu kachasị amasị ha. Mgbe ị na-egwu egwuregwu, ọtụtụ mmadụ kpọrọ mgbasa ozi asị.